Banaanbax ka dhan ah Shabaab oo ka dhacay Magaalada Nairobi | raascasayrmedia.com
← Faahfaahin Weerarkii lagu qadey ciidanka Ladagaalanka Burcadbadeedka Puntland
Shirweynaha Beelaha siwaaqroon oo maalinti labaad galay iyo gudiyo looga dhawaaqay →
March 11, 2011 · 10:44 pm
Banaanbax ka dhan ah Shabaab oo ka dhacay Magaalada Nairobi
Banaanbax looga soo horjeeday Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa maanta waxaa uu ka dhacay magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya.
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya, waxaa maanta magaalada Nairobi ka dhacay baananbaxyo ay dhigayeen boqolaal qof oo u badan dadka Keenyaati ah oo ku nool gudaha dalka Kenya gaar ahaan Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya.
Banaanbaxa ayaa la sheegay in looga soo horjeeday Xarakada Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, waxaana dibad baxayaasha oo ahaa dad u dhashay Kenyaan ay dalbanayeen in dowladda Kenya ay adkeyso amaanka xadka ay la wadaagto Soomaaliya kadib markii ay sheegeen in dagaalo saameeyay Kenya ay ka dhaceen degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo.
Dibadbaxayaasha oo watay boorar ay ku necbaysanayeen Xarakada Shabaab iyo falalka ay gaystaan ayaa Mas’uuliyiinta dowladda waxaa ay ka dalbadeen in la xaqiijiyo oo la sugo xuduuda dalka Kenya uu la wadaago Soomaaliya.
Banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale waxaa ay sheegayeen islamarkaana ay ka codsanayeen Al Shabaab inaysan u soo talaabin gudaha dalka Kenya maadama Maamlo ka hor Shabaab ay ku hanjabeen inay ka fiirsanayaan talaabooyinka ay ka qaadayaan dowladda Kenya.
Waa banaanbaxii ugu horeeyay oo dad Keenyaati ah ay dhigaan oo looga soo horjeedo Xarakada Shabaab, waxaana dibadbaxaan uu kusoo aadayaa xili maalmo ka hor Afhayeenka Shabaab Sheekh Cali Max’uud Raage (Cali dheere) iyo Sheekh Muqtaar Rooboow Abuu Mansuur hadalo digniin iyo hanjabaad u muuqday ay u jeediyeen dowladda Kenya.